घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू स्पेनिश फुटबल खेलाडीहरू एन्ड्रेस इनिस्टा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल कथालाई सब भन्दा राम्रो भनिन्छ उपनाम; 'don Andrés'। हाम्रो एन्ड्रेस इनिस्टा बचपन स्टोरी प्लस अनबल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समयदेखि नै उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनीहरूको बारेमा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र बन्द र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले उनीहरूको क्षमताको बारेमा जान्दछ तर कमेन्टले एन्ड्रेन्स इनिस्नी जीवनी स्टोरीलाई बुझ्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu को बिना, सुरु गर्न।
एन्ड्रेस इनिस्टा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य -बाल्यकाल
मईियर 11th मा जन्मिएको Andrés इनिस्टा लुजानोवा, फ्यानेंटेलबिला, स्पेन को जोस, जोसे एंटोनियो इनिस्टा (बिजनेस मंगोल) र मातृ, मारिया लुजान इनिस्टा (घर को हेरचाह) द्वारा अज्ञात गाँउ मा 1984।
उहाँ दुवै भाग्यमानी र धनी बच्चाको रूपमा जन्मनुभएको थियो। स्पेनको अल्बैटेको अद्भुत नगर पालिकाबाट आउन आफ्नो आमाबाबु र भाग्यमानी रिच। उहाँले अल्बेकेटको नगरपालिकामा हुर्के जुन दुई चीजहरूको लागि चिनिन्छ; स्थानीय स्पेनिश स्पिकरहरू र उनीहरूको असल दाखिलाको उच्च प्रतिशत।
अन्ड्रेलाई उसले सबैलाई आवश्यक थियो र जवान बच्चाको रूपमा जीवनमा चाहन्थे। बारीमा, उहाँका लागि आमाबाबुको इच्छालाई सम्मान गर्नुहुन्थ्यो।
अन्डर इनिस्टा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -प्रारम्भिक क्यारियर
उनले अल्बैटे बेलुमी, आफ्नो गृहनगर अल्बैटेको स्थानीय क्लब संग 10 उमेर मा खेल्न थाले।
अन्डर इनिस्टा बचपन फोटो
12 को उमेर मा जब टूर्नामेंट मा खेल्यो, उनले स्पेन को आसपास फुटबल क्लबहरुको ध्यान आकर्षित गरे। इनिस्टाको आमाबाबुले एफसी बार्सिलोना कोच एन्रियक ओरिजोलासँग सम्बन्ध राखेका थिए।
उनीहरूको छोरालाई खेलमा गिफ्ट गरिएको थियो, उनीहरूले बार्सिलोना युनाइटेड अकादमीमा इनिस्टालाई स्वीकार्ने विचार गरे।
एक हालसालै साक्षात्कारमा, इनिस्टाको पिताले त्यो क्षणलाई सम्झना पछाडि सम्झाउनुभयो .. "तपाईं कसरी क्षणमा एन्ड्रेजले आफ्नो सामान प्याक गर्न र बार्सिलोनामा जान्थे होला?" उसको अनुसार..यो एकदम लामो प्रक्रिया थियो जसमा उनले अन्तिम निर्णय गरे। हामीले एफसी बार्सिलोनाको प्रस्ताव प्राप्त गर्यौं र उसलाई आफैंले क्लबको अकादमी ला मसिया जान चाहन्थ्यौं, किनकि हामी हाम्रो गृहनगर फ्युनिसेलबिला छोड्न सकेनौं। उनी परिवार छोड्न चाहन्थे र उनीहरूलाई आफैं टाढा जान लागेन। मैले उनलाई बताए कि यी अवसर प्रायः प्रायः आउँदैन, त्यो अकादमीमा राम्रो निर्माण हुनेछ ... अन्ड्रेज मेरो लागी एक दिन पछि र यसो भन्यो: "पिताजी, म बार्सिलोना जान्छु"। मलाई भ्रमित थियो, त्यसैले मैले उहाँलाई सोधें किन उनले आफ्नो मन परिवर्तन गरे। अनि उनले मलाई साँच्चै चम्किरहेको कुरा बताए। उनले यसो भने: "म जाँदैछु, किनकि तपाईं मलाई जान चाहन्छु, किनभने यो तिम्रो सपना हो"। त्यस क्षणबाट म भन्न सक्छु कि मैले मेरो छोराबाट धेरै कुराहरू सिकेको छु। उहाँले मलाई धेरै 12 मात्र हुँदा मलाई धेरै सिकाउनुभयो।
उनले युवा फुटबलरहरूको लागि प्रतिष्ठित ला मसा अकादमी भेट्न आफ्नो आमाबाबुसँग यात्रा गरे, पछि उनको आमाबाबुले अकादमीमा नामांकन गर्न निर्णय गरे। उनको फोटो दृश्य पछि, उनको आमाबाबुले घरको लागि छोडे। यो वर्ष 1996 मा भयो।
धेरै अकादमीहरूको विपरीत, एफसी बार्सिलोनाले सबैका खेलाडीहरू शहरबाट बाहिर निस्कने गर्छ भने आफ्नै 13 वा 14 उमेरको होस्टमा। यद्यपि, इनिस्टा केवल 12 थियो र क्लबको लागि कि कुनै युवालाई साइन इन गर्न असामान्य थियो। केही विरोधाभासहरूको बावजुद, क्लबले उनलाई भर्ती गर्न उत्प्रेरित गरिसकेको थियो र उनीहरूलाई आफैं र खेलाडीको लागि सबै भन्दा राम्रो निर्णय लिन सक्ने विश्वास दिलाउन सक्छ।
Andres Iniesta एफसी बार्सिलोना मा सुरू गर्नुहोस्
अन्डर इनिस्टा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -कठिन सुरुवात
एक जवान इनिस्टाले आफ्नो आमाबाबुबाट जीवन बिताउन संघर्ष गरे, अक्सर प्रायः होमिक थियो र आफैलाई राखे।
इनिस्टा भन्छिन् "रोकिने नदीहरू" त्यो दिन को लागि छोड्यो ला Masia र उनको आमाबाबुबाट अलग रहन संघर्ष। त्यहाँ धेरै शर्मीला थिए र त्यहाँ त्यहाँ राखे।
युवा Andres Iniesta आफ्नो आमाबाबुलाई हराइरहेको छ
अन्डर इनिस्टा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -प्रसिद्धिको कारण
उनले बार्सिलोना अंडर-एनएनएमएक्सएक्सको उपाधि जितेको प्राइमियर कपको क्रिकेटमा XNumX ले जित्यो, अन्तिम मिनेटमा विजेता गोलको स्कोरमा उनले गोल गरे र टूर्नामेंटका खेलाडीलाई नामकरण गरे। तल Guardiola को तस्वीर इनिस्टा, उनको ट्राफी को लागी एक तस्वीर हो।
युवा अन्ड्रेस इनियesta बाट एक पुरस्कार प्राप्त पेप Guardiola
उनको शैली, सन्तुलन र कौशलले स्पेनलाई यूईएफए युरोपेली ओन-एक्सएनएक्स च्याम्पियनशिप 17 र निम्न वर्षको अन्तर्गत 2001 च्याम्पियनशिप जित्न सफल भयो।
इनिस्टा क्लबको पछि लागे पछि, त्यसपछि कप्तान पेप Guardiola प्रसिद्ध रूपमा सँगी मिडफिल्डर Xavi लाई भन्नुभयो: "तपाईं मलाई रिटायर गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। यो पुर्खा [ईनिस्टा] हामी सबैलाई रिटायर गर्न जाँदैछ "
उनले केवल आफ्नो 11 वर्ष कैरियर बाट क्लबमा गार्डियोलालाई रिटायर गरे जुन 1990 बाट 2001 सम्म स्पेस गरिएको थियो।
यंग एन्ड्रेस इनियस्टा, फोर्सिंग पेप Guardiola सेवानिवृत्त गर्न
बाक्लो, जुन तिनीहरू भन्नुहुन्छ अब इतिहास हो।
अन्डर इनिस्टा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
Andres Iniesta एक विनम्र र धनी परिवार पृष्ठभूमि देखि आउँछ। एक ठेठ स्पेनी परिवार।
उनको बुबा व्यापार मुगल जो खरोंच देखि बाहिर शुरू गर्यो। जोस एन्टोनियो इनिस्टा व्यवसायिक साम्राज्यहरूको स्वामित्व लिनु निर्माण निर्माणको रूपमा शुरु भयो। जब उसले कुनै काम गर्न सकेन भने, उनी वेटरको रूपमा काम गर्न समुद्र तटमा जान थाले।
एन्ड्रेन्स इनिस्टा डड- जोसे एंटोनियो इनिस्टा
उहाँ सधैँ फुटबलको प्रेमी हुनुहुन्थ्यो र सबै प्रयासहरू बनाउनुभयो, त्यसैले उनको छोरा इन्द्रेले आफ्नो खुट्टामा बल बनाउने सपना देखाउन सक्थे।
जोसे एंटोनियो र एन्ड्रेस
तिनको प्रारम्भिक दिनबाट स्पेनको फ्युनिसेलबिल्लामा विश्व फुटबलको शिखर पुग्न सम्म सम्म जोसे एण्टोनियोले आफ्नो छोराको बिरुद्ध भएको थियो।
एन्ड्रेस इनियस्टा, पिता, जोस संग ठोस सम्बन्ध छ
उनी आफ्नो छोरालाई पीडा वा घायलमा हेर्दा रोइरहेका छन्। जोसे एंटोनियो इनिस्टा अनुसार,
"हो, धेरै धेरै। म सजिलै रुन्छु। म रोइरहेछु जब मेरो एन्ड्रेन्सलाई चोट लागेको छ वा दुखाइमा देख्न केहि जान्दछ कि केहि सही छैन। अधिक त, रोइरहेका धेरै क्षणहरू थिए जब एन्ड्रेज घरबाट टाढा एफसी बार्सिलोनामा आफ्नो क्यारियर सुरू गर्न थालें। "
विश्वका खेलाडीहरूको शीर्ष मुट्ठीमा भए तापनि इनिस्टासँग परिवारको लागि समय छ।
जोसे एंटोनियो इनिस्टा र छोरा, एन्ड्रेस इनिस्टा पारिवारिक व्यवसाय गर्दै
हाल, जोसेन एन्टोनियो परिवार वाइनरी बोडेगास इनिस्टा चलाउँछन्। जब मान्छे उसलाई सोध्छन् जब आफ्नो छोरा को एक दाखरस संग तुलना गर्नुहोस, त्यो भन्छन् "यो राम्रो गुणको एक वाइन, निष्कपट र बुद्धिमानी हुनेछ।"
इनिस्टा एसआर बताउँछ कि उनको छोरा कसरी फुटबलमा मात्र ध्यान दिए र क्लब र देशको लागि राम्ररी प्रदर्शन गरिरहेको छ।
"उनले कहिल्यै पनि नेता वा कुनै पनि कप्तान हुन तपस्या गरेनन्" उस्ले भन्यो। "त्यहाँ कप्तानहरू छन् जसले आफ्नो बहादुरी र अरूले आफ्नो नम्रताको साथ आफ्नो भूमिका जित्छिन्, उनीहरूले उनीहरूको टोली-साथीहरूद्वारा चुनेका छन्। मेरो छोरा अन्ड्रे मात्र छ। "
मातृभाषा: तल चित्रित मारिया लुजान अन्ड्रेस इनिस्टाको आमा हो।
Andres Iniesta र आमा, मारिया लुजान
मारिया लुजान एक मीडिया व्यक्ति को छैन तर कसैलाई जो लगभग हरेक एकल खेल उनको छोरा को हेरिएको छ उनको क्यारियर को शुरुवात पछि खेलेको छ।
सिस्टर: मारिबिल इनिस्टा एन्ड्रेंस इनिस्टाको मात्र बहिनी र भाइ हो। त्यो क्षेत्रमा बराबरी भएको छ जहाँ शराब व्यवसाय अझै बढ्दै गएको छ। उनी उनको पिताको बिरुद्ध उनको जस्तो देखिन्छिन्।
एन्ड्रेन्स इनिस्टा बहन मारिबिल इनिस्टा
हालै आफ्नो परिवारको वाइन कम्पनी व्यवस्थित गर्दा मार्बिबलले आफ्ना जडहरूमा हिर्काउँछ।
अन्डर इनिस्टा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
एन्ड्रेस इनिस्टाको लाइट स्टोरी र जीवन एक महिला मात्र घेरिएको छ। त्यो सुन्दर एक, अन्ना Ortiz भन्दा अन्य छैन।
एन्ड्रेन्स इनियस्टा को लव स्टोरी संग अन्ना ओर्टिज
अन्ना Ortiz एक क्याटलिन र पेशेवर मेकअप मा विशेषज्ञ, छवि परामर्श,
कपाल ड्रेसिंग, सुन्दरता र स्वास्थ्य, त्यो वर्तमान मा कोटोन र बोइसमा एक इंटीरियर डिजाइनरको रूपमा काम गर्दछ।
तिनीहरू एक समयमा भेटिए इनिस्ता वर्ष 2008 मा उनको तंगमा चोट लागेको थियो। उनले उनको साथमा प्रेम गरिसकेपछि उनले उनीहरूलाई केही फिजियोथेरेपी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरे।
सेप्टेम्बर 2010 एन्ड्रान्स इनिस्स्टाले पुष्टि गरे कि अन्ना गर्भवती भएकी छिन्। उनले वेलिएरिया इनिस्टा Ortiz लाई जन्म दिए। तलका आमाबाबुले वालेलियाको चित्र हो।
एन्ड्रेस इनियस्टा, अन्ना ओर्टिज र उनकी छोरी, वेलेरिया
एन्ड्रेस इनिस्टा र अन्ना ओर्टिजले चार वर्ष पछि खुसीसाथ एकसाथ विवाह गरे 2012 मा विवाह गरे। विवाह त्रागनाको नजिकै तामारिटको महलमा भएको थियो।
विवाहमा उपस्थित प्रसिद्ध नामहरूमध्ये लियोनेल मेस्सी, साथै पूर्व-बार्सिलोना स्ट्र्युमर शमूएल इटोओ थिए।
विवाह पछि केही समयपछि उनीहरूले ट्विटरमा आफ्नो XNumXmillion अनुयायीहरूलाई खबर पठाए, आफूले आफ्नी पत्नीसँग आफूलाई चित्रको रूपमा पोस्टिङ गरेर यस्तो टिप्पणी गरे: 'अद्भुत दिन! भर्खरै बिबाहित।'
Andres Iniesta को फोटो फोटो
इन्ड्रे इनिस्टा र उनको नयाँ श्रीमती अन्ना ओर्टिजले आफ्नो हनीमूनको मेक्सिकोको क्यानकन, समुद्र तटमा बिताए। त्यहाँ, ओभरटाइम नववर्षहरू अत्यन्तै खुसी र खुसी भएका थिए किनभने तिनीहरूले धूप मौसमको सबैभन्दा ठूलो बनाएका थिए।
अन्ड्रेस इनिस्टा पत्नी संग हनीमून का आनंद उठाउँछन्
मईको 31 मा, 2015, एन्ड्रेना र अन्नाको दोस्रो बच्चा र पहिलो छोरा हो। उनको नाम पाओलो अ Andrea इनिस्टा छ।
Andres Iniesta पूरा परिवार फोटो
एन्ड्रेन्स इनियस्टा एक राम्रो बुबा हो जसले आफ्ना बच्चाहरु संग गुणस्तरको समय खर्च गर्न मनपर्छ। उहाँ सधैँ संसारलाई थाहा छ भनेर जाने प्रयास गर्नुहोस्। उहाँ एक वास्तविक आमाबाबु हो जसले आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्नै आवश्यकताभन्दा माथि राख्नुहुन्छ र चाहन्छ।
Andres Iniesta - हेरविचार पिता
जस्तै Radamel Falcao र रबर्ट लुवेन्डोस्की, एन्ड्रेन्स इनिस्टा एक पारिवारिक जीवन बिताएको छ।
हो, पूर्व प्रिमियर लीग प्रबन्धकहरू सर एलेक्स फर्गुसन र हैरी रेनकेपप उनीहरूको शराबको प्रेमको लागि चिनिन्थे, तर तीमध्ये कुनै पनि त्यहाँ दाखिला वा भान्साको मालिक थिएन।
अझ धेरै, आजको फुटबल खेलाडीहरूले आफ्नो धनलाई खेलकुद वा फ्लैश अपार्टमेन्टमा अङ्गुरको खेतीको रूपमा कोषको रूपमा केहि पनि लगानी गर्नु भन्दा बढी सम्भावना राख्ने सम्भव छ।
तर सम्भवतया राम्ररी राम्ररी चिनिन्छ, उनको शान्तिक जीवनको कारण, अन्ड्रेस इनिस्टा हो जसले जसले आफ्नो समय र पैसा दुवै रक्सी उत्पादनमा राखेको छ।
Andres Iniesta- वाइन उत्पादन विशेषज्ञ
उनको विवाहको समयमा, उहाँले आफ्ना सारा आगन्तुकहरूलाई आफ्नो इनिस्ताको दाखरस पिटाइदिनुभएको छ, जो उनको छोरी वालियारियाको नाममा छ।
यसको लागि एक परिवारको व्यवसाय। यदि तपाईं स्पेनमा बसिरहनुभयो भने तपाईले पनि उनको चेहरा देख्न सक्नुहुनेछ कि उनको परिवारको व्यवसायबाट मदिरालाई प्रमोशन गर्ने विज्ञापनबाट बाहिर निस्कन्छ, Bodega Iniesta। यो ठूलो व्यापार हो र सबै परिवार यसमा समावेश छ।
परिवार सफल भएको फुटबल खेलाडी गर्नु अघि व्यवसाय पहिल्यै स्वामित्व लिईयो, र त्यो ठूलो भएकोले त्यो पनि यसको विस्तारमा संलग्न भएको छ।
वास्तवमा, इनिस्टा आफ्नो परिवारबाट तेस्रो पीडा हो र शराब व्यापारमा भूमिका लिनु, जुन उनको दादा जोस एन्टोनियोद्वारा स्थापित गरिएको थियो।
कुल मा, उनको परिवारले दाखिलाका 180 हेक्टेयर भन्दा बढी छ, र सबै मदिरा यसको विशेष फलबाट बनाइन्छ।
Andres Iniesta वाइन दाखिला
व्यवसाय Albacete मा स्थित छ, जो Valencia देखि दुई घण्टा को ड्राइव छ, र म्याड्रिड देखि दुई-घन्टा-घन्टा को आफ्नो सबै भन्दा ठूलो बजार। उनको कम्पनीले 35 मान्छे, वाइनरीमा 25, र दाखिलाहरुमा 10 पूर्ण समय मा काम गर्दछ जहाँ विशेष शराब फलों को खेती गरिन्छ।
Andres Iniesta वाइन फलों
लेखनको समयमा, उनको कम्पनीले आफ्नो छोरी वालियायियाको नाममा एक शराब बेच्न पाउँछ, र उनको छोरा पाओलो अरेर्ड पछि।
उनले "116" भनिने अर्को शराब पनि पेश गरे जुन जोन मा मिनेट को सम्झना दिलाए पछि उनले एक्सएनएनएक्सएक्स विश्व कप फाइनलमा जीत हासिल गरे।
कुल मिलाएर, 1 लाई 1.2 लाख बोतलको शराब प्रति वर्ष उनको कम्पनीमा उत्पादन गरिन्छ। उनको शराब 33 देशहरुमा उपलब्ध छ, पूर्वी एशिया, दक्षिण, मध्य र उत्तरी अमेरिका, र पश्चिम र पूर्वी यूरोप सहित। मा UK तिनीहरूले पाउन्ड 6.50 को लागि £ 17 सम्म बेच्न सक्छन्।
अन्डर इनिस्टा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -उहाँ एक पटक म्याड्रिड फ्यान हुनुहुन्थ्यो
प्रत्येक अन्य जवान फुटबल फ्यान जस्तै, एन्ड्रेन्स इनिस्टाले आफ्नो स्थानीय क्लबलाई समर्थन गरे, अल्बैटे र बार्सिलोना नजिकैको दोस्रो थियो किनकी उनले पूर्णतः माइकल लाउडोपको पूजा गरे। जब उनी भर्खरै छँदा, क्याटलनियन खेलाडीहरूले आफ्नो प्रिय पक्ष 7-1 लाई पराजित गर्यो र उनीहरूको लागि गहिरो एन्टिओसिटीको विकास गरे जुन केवल उनीहरूको सबैभन्दा घृणित प्रतिद्वन्द्वी रियल म्याड्रिडमा आफ्नो निष्ठा परिवर्तन गरेर सन्तुष्ट हुन सक्छ।
लाउड्रोपले 1994 मा रियल म्याड्रिडमा जानुभयो जब उनीहरूको वफादारीमा उनको परिवर्तन अझ पुरानो थियो। पहिले प्रकट भएको, यो उनको पिता थियो जसले उसलाई एफसी बार्सिलोनासँग संलग्न राखे।
अन्डर इनिस्टा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -उच्च सम्मानित
लेखनको समयमा, अन्ड्रेस इनियस्टा बिना स्पेनमा सबैभन्दा सम्मानित फुटबलर छ। उनको शराब मैड्रिड मा आफ्नो पुरातन प्रतिद्वंद्वियों को घर मा धेरै राम्रो बेचछन।
Catalonia मा उनी बार्सिलोनाको कप्तानको रूपमा सम्मानित छन् र स्पेनको बाकीमा उनी स्पेनको लागि विश्व कप जित्ने पुरुषको रूपमा सम्मान गर्छन्।
साथै, उहाँ एक स्पेनी स्पैनिश परिवारका सदस्य हुनुहुन्छ, जुन मानिसहरूले सराहना गर्छन्। र त्यो राजनीतिक विवाद मा शामिल छैन, जो केहि अन्य बार्सिलोना वा रियल म्याड्रिड खेलाडी कहिलेकाहीँ गर्छन।
अन्डर इनिस्टा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -उहाँले एक पटक कहिल्यै एफसी बार्सिलोना चाहनुहुन्न
बार्सिलोना स्टार एन्ड्रेन्स इनिस्साले सनसनीसाथ प्रकट गरे कि उनले प्रारम्भिक रूपमा क्लबको साथ आफ्नो बलियो पारिवारिक सम्बन्धको कारण क्यान्टिन क्लबमा सहभागी गर्न चाहँदैनन्। तिनी नयाँ चुनौती चाहन्थे, टाढाको घर सार्न खोजे।
उनको शब्दहरुमा, "म आउन चाहन्न किनभने मैले उनीसँग मेरो पारिवारिक सम्बन्धलाई विचार गरें। मलाई बिना टाढा एक स्थानमा जानु आवश्यक छ, " इनिस्टाले भने Bein sports।
हप्ताको पासो र मेरो बुबासँग कुरा गरिसकेपछि तिनलाई वरिपरि घुमाउन।
इनिस्ट जारी छ ..."मेरो बुबाको साथमा धेरै आत्मविश्वास छ, धेरै आत्मीयता र मलाई थाहा छ कि जब उहाँले मलाई कुराहरू भन्नुहुन्छ, उहाँ सामान्यतया सफल हुन्छ। म मेरो बुबाको सम्मान गर्छु र मलाई थाहा थियो कि मलाई डुब्न थाल्छ। मेरो एफसी बार्सिलोनाको लागि खेल्नको लागि, मैले मेरो जीवनको सबैभन्दा खराब महिना एक व्यक्तिको रूपमा देखे, तर सबैको सहयोगको साथ, दिनको दिन, यो धेरै राम्रो थियो। "
भन्नु पर्दैन, इनिस्टाको प्रारम्भिक भयानक निर्णयले अविश्वसनीय ढंगले राम्रो काम गरेको छ।
तर,उनको धेरै उपनामहरू
इनिस्तामा धेरै उपनामहरू छन्। स्पेनी प्रेस प्रायः उनको रूपमा उल्लेख गर्दछ डोन एन्ड्रेस जबकि केहि उसलाई बोलाउछ एल इल्युटिस्टा (भ्रमवादी) पिचमा कुनै पनि स्थितिमा खेल्ने क्षमता र इच्छाको कारणले।
अरूले उनको असाधारण फुटबलिंग खुफियाको कारण एल क्येरब्रो (ब्रेन) लाई फोन गर्छन्।
रियल म्याड्रिडको कुख्यात Galacticos मा खुदाईमा, डाउन-टू-पृथ्वी इनिस्टा पनि एल एन्ट-गैल्याक्टिकमा राखिएको छ।
अन्तमा, इनिस्टाको पिड पिक्चरले उनलाई उपनाम (द नेल नाइट) पनि कमाएको छ।
एन्ड्रेस इनिस्टा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य-एक पटक एक आईजी खाता चोरी
Andrés Iniesta लाई कुनै पनि जस्तै जस्तै Instagram प्रयोग गर्दछ। "म बुबा हुँ जुन आफ्ना छोराछोरी, स्वादिष्ट खाना र रोचक भवनहरू चित्रण गर्न मनपर्छ।" उनले हालैको मध्यम पोष्टमा लेखे।
एक दिन, इनिस्टा अचानक आफ्नो खाता निलम्बित भेटिए, इन्स्टाग्रामले दावी गरे कि उनीहरूले उनीहरूको परिवार, खाना र वास्तुकला तस्विरको साथ कम्पनीको सर्तको सेवा उल्लङ्घन गर्थे।
इनिस्टाले पत्ता लागेको थियो कि अचानक अजीब र स्थितिले उनीहरूको इन्स्टाग्राम उपस्थिति हुँदा अधिक जानकारी प्राप्त गर्यो, बिना चेतावनी बिना, अर्को अन्ड्रेस इनिस्टासँग प्रतिस्थापित भयो।
इनिस्टा कम्पनीबाट कुनै प्रतिक्रियाको साथ धेरै पटक इन्स्टाग्राम बाहिर पुग्ने प्रयास गरे, भित्ताका फोटोहरू गायब भएपछि र उनको प्रयोगकर्तानामलाई अरूलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
तर अन्ततः Instagram ले चीजहरू सही बनायो, इनिस्टाको मूल खाता पुनर्स्थापित गर्दै र फुटबलको तारालाई अर्कोमा थोडा, थोडा कम वांछनीय प्रयोगकर्तानामलाई बलियो बनायो।
प्रदान एक बयान मा Gizmodo, इन्स्टाग्रामले यो कसरी चाँडो र बिना कुनै स्पष्ट वा उचित कारण बिना कसरी व्यवस्थित गर्ने बारेमा विस्तारमा जान्छ।
"हामीले यहाँ एक गल्ती गरे र हामीले यसको बारेमा थाहा पाईएको खाता पुनर्स्थापित गरौं," कम्पनीले भन्यो। "हामीले सतावटको कारण श्री इनिस्टामा हाम्रो क्षमाप्रार्थी बाहिर जान्छौं।"